» दु:खद !१३ महिनाको यी सानी नानी सियोनालाई (SMP) नामक खतरनाक रोग लाग्यो ,जस्को उपचारको लागि २५ करोड रुपैयाँ लाग्छ,सबैले सहयोग गरौँ नसके सेयर गरौँ दु:खद !१३ महिनाको यी सानी नानी सियोनालाई (SMP) नामक खतरनाक रोग लाग्यो ,जस्को उपचारको लागि २५ करोड रुपैयाँ लाग्छ,सबैले सहयोग गरौँ नसके सेयर गरौँ – हाम्रो खबर
दु:खद !१३ महिनाको यी सानी नानी सियोनालाई (SMP) नामक खतरनाक रोग लाग्यो ,जस्को उपचारको लागि २५ करोड रुपैयाँ लाग्छ,सबैले सहयोग गरौँ नसके सेयर गरौँ
काठमाडौ । मानिस ज’न्मिदै कस्तो भाग्य लिएर आउँछ त्यो कसैलाई थाहा छैन । नानी सियोन श्रेष्ठ अहिले मात्र १३ महिनाकी भइन् । उनकी आमा एलि’ना गुरुङ् पेसाले नर्स हुन ।
बाबु डा. सन्दिप श्रेष्ठ आफैमा वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ हुन् । उनले विशेषज्ञताले हज्जारौ नानी बाबुहरुको जीवन रक्षा भएको छ । उनी छोटो समयमा नै हरेक नेपालीको मनमा बस्न सफल चिकित्सकमा पर्छन् ।
तर भाग्यको खेल उनकै छो’री सि’योना श्रेष्ठमा जन्म’जात वंशानुगत लाग्ने रोग SPINAL MUSCULAR ATROPHY (SME-1) लाग्यो । यो रोग भएपछि बच्चाका अंगहरुले काम नगर्ने, विस्तारै सबै सुक्दै जाने र मृत्यु हुने जस्ता लक्षण देखिन्छ । यो अत्यन्तै खर्चिलो रोग हो । यसको उपचारका लागि करिब २५ करोड रुपैया लाग्दछ ।
यसको उपचार अमेरिका लगायत उच्च विकसित देशका ठूला अस्पतालमा मात्र सम्भव छ । यस बिरामीको उपचार २ वर्ष भित्र गरिसक्नु पर्ने र १ वर्ष भएपछी शुरू गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यस रोगको उपचार नेपालमा सम्भव नभएको हुदा अमेरिका लगि उपचार गर्नुपर्नेछ ।
लगभग २५ करोड नेपाली लाग्ने भए’काले प’रिवार स्तब्ध अनि गहिरो चिन्तामा छन् । तर परिवारले आफ्नी छोरी बचाउन हिम्मत हारेन ।
उनीहरुले विश्वभरीका मानि’सहरुलाई सहयोगको अपिल गरे । अहिले उनीहरुलाई झण्डै साढे ३ करोड सहयोग मिलिसकेको छ । तर यो १ करोडको विषय मात्र हैन ।
कम्तिमा २५ करोड रकम पुर्याउनु सामान्य कुरा छैन । यसैले उनीहरु नानीको जीवन रक्षाका लागि सबैसँग अपिल गरिरहेका छन्।
तर उनीहरुलाई ज’तिसक्दो अझै क’रोडौ सहयोग अति छिटो जरुरी छ । उनकी आमाले अक्टोबर १२ मा पोष्ट गरेकी छिन् । आज हाम्री छोरो १३ महिनाकी भइन् । अब हामीसँग १ महिना मात्र बाँकी छ । निश्चित समयभित्र उपचार गरिसक्नुपर्नेछ । रकम अझै अभाव छ ।
त्यो निश्चित समयसम्म हामीले रकम जुटाउन सकेनौँ भने फेरी के हुन्छ ? यो सम्झिदापनि भक्कानो छुटेर आउँछ । अब फेरी अर्को जन्मदिन कस्तो हुने हो ।
छोरीको हड्डी र मांशपेशीहरु कम’जोर बन्दै गएका छन् । हेर्दा हेर्दै अत्यन्तै कजोर बनिरहेकी छिन् । हरेक क्षण आँशु मात्र आउँछ